Umgangatho ophezulu weCarbon Fibre yePlate yokulala
Isixhobo esitsha seCarbon Fibre yesixhobo seZonyango
Isisindo sokuKhanyisa iKhabhoni yeCarbon yoFundo lweFowuni ye Knife
Ukuchaneka okuphezulu okwenziwe ngokwezifiso kwe-CNC kwekhabhoni yokusika
Isentengiso eshushu se-aluminium inyathelo lokuma eline-knurled
Uyilo olutsha lwe-standoff hex aluminium inyathelo lokuma
Umbala opheleleyo anodised hex aluminium standoff
Isikali se-Costomised Socket entloko ye-aluminium screw
I-cap Head Screw Muti-umbala weAluminiyam Screw
I-6061/7075 i-aluminium iqhosha lekhanda isikulufu
Ubungakanani obucwangcisiweyo beekhabhonibhuli ezisisikwere
i-CNC ehleliweyo yokusika i-carbon fiber eyi-4mm
Iphepha lekhabhoni lephepha lokuhombisa
Amandla aphezulu eCarbon Fibre Plate
Ibhodi yomxube wekhompyuter ye-3K
Uxinzelelo oluphezulu lwe-carbon fiber tube octagonal tube
IHobbyCarbon hight esemgangathweni ye-carbon fiber fiber ityhubhu
Ukuqina kunye nePlain yoQiniso oluPhezulu lweCarbon fiber sheet
Isisindo sokuKhanyisa iKhabhbhari Fibeta Ishiti yeDrones
Umgangatho ophezulu weCarbon Fibre yePlate yokulala Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko...
Isixhobo esitsha seCarbon Fibre yesixhobo seZonyango Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko...
Isisindo sokuKhanyisa iKhabhoni yeCarbon yoFundo lweFowuni ye Knife Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo,...
Ingcaciso yeMveliso Ukuchaneka okuphezulu okwenziwe ngokwezifiso kwe-CNC kwekhabhoni yokusika Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi...
Ukonakala kwemveliso: Isentengiso eshushu se-aluminium inyathelo lokuma eline-knurled I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium / 7075 aluminium Shape: Inyathelo Umbala:...
Ukonakala kwemveliso: Uyilo olutsha lwe-standoff hex aluminium inyathelo lokuma I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium / 7075 aluminium Shape: Inyathelo Umbala: mnyama,...
Ukonakala kwemveliso: Umbala opheleleyo anodised hex aluminium standoff I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium / 7075 aluminium Shape: Hexagon Umbala: mnyama, isilivere,...
I-OEM kunye ne-ODM i-Aluminium Knoffled Standoffs Round Standoffs Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical, Ubume...
Ingcaciso yeMveliso IColoful Self Lock Aluminium Hex Nut eneFlange I-aluminium nati ene-flange iya kuthatha indawo entsha yabenzi bezomatshini kunye nezomatshini wokuqinisa, lolunye uhlobo lokuqina kwealuminium. Isetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo zekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yokuthumela...
Isikali se-Costomised Socket entloko ye-aluminium screw Intshayelelo yeMveliso Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Isikulufu...
I-cap Head Screw Muti-umbala weAluminiyam Screw Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Isikulufu sekomityi yentloko ayisoloko...
I-6061/7075 i-aluminium iqhosha lekhanda isikulufu Intshayelelo yeMveliso Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Isikali esijikeleze...
Ubungakanani obucwangcisiweyo beekhabhonibhuli ezisisikwere Ingcaciso yeMveliso Isixhobo: Iipesenti eziyi-100 zeekhabhoni, i-Vinyl resin, i-Epoxy resin. Ubungqingqwa: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Ubude: ubude obude buyi-1500mm Inkangeleko: I-3K i-twill yeave, i-weave ebonakalayo, okanye ezinye Gqibezela: glossy, matt,...
Min. Myalelo: 10 Bag/Bags
i-CNC ehleliweyo yokusika i-carbon fiber eyi-4mm Iphepha leCarbon fiber linamandla aphakamileyo, ubunzima obukhanyayo, kunye nokubengezela kweMatte okugqityiweyo, la makhishithi anokusetyenziselwa ukwakha izakhiwo ezomeleleyo, ukwenza izixhaso, okanye ukwakha amalungu akho. Isetyenziswe ngokubanzi iAerospace, imodeli...
Iphepha lekhabhoni lephepha lokuhombisa Iphepha lekhabhon-fiber linamandla aphezulu kakhulu, ubunzima obukhanyayo, kunye nokubengezela kweMatte okugqityiweyo, la makhishithi anokusetyenziselwa ukwakha izakhiwo ezomeleleyo, ukwenza ukuxhasa, okanye ukwakha amalungu akho. Isetyenziswe ngokubanzi iAerospace, imodeli...
I-Carbon Fiber Sheet UAV yeePlani zeemoto zeCarbon Iphepha leCarbon fiber sheet CNC inkonzo : I-1: 100% ye-carbon fiber, Amandla aphezulu kunye nobunzima bokukhanya, Umphezulu olungileyo Isixhobo se-2.Raw: Ingeniswe eTaiwan okanye Japan Japan 3.Ngaphandle kwe-3K + Ngaphakathi kwi-Car Carbon I-4.Surface: I-3K i-matill...
Ibhodi yomxube wekhompyuter ye-3K Ingcaciso yeMveliso: Iphepha le-3K lekhabhon fiber linamandla aphezulu kakhulu, ubunzima bokukhanya, kunye nokubengezela okucacileyo kunye nokubonakala ngokucacileyo. isetyenziswa ngokubanzi kwimodeli yehelikopta kunye nemarike yokuzonwabisa. Ingenziwa ibe yikharbhon elucocekileyo...
Uxinzelelo oluphezulu lwe-carbon fiber tube octagonal tube Ingcaciso yeMveliso Isixhobo: Iipesenti eziyi-100 zeekhabhoni, i-Vinyl resin, i-Epoxy resin. Ubungqingqwa: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Ubude: ubude obude buyi-1500mm Inkangeleko: I-3K i-twill yeave, i-weave ebonakalayo, okanye ezinye Gqibezela: glossy, matt, yendalo...
IHobbyCarbon hight esemgangathweni ye-carbon fiber fiber ityhubhu Ingcaciso yeMveliso Isixhobo: Iipesenti eziyi-100 zeekhabhoni, i-Vinyl resin, i-Epoxy resin. Ubungqingqwa: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Ubude: ubude obude buyi-1500mm Inkangeleko: I-3K i-twill yeave, i-weave ebonakalayo, okanye ezinye Gqibezela: glossy, matt,...
Ingcaciso yeMveliso Ukuqina kunye nePlain yoQiniso oluPhezulu lweCarbon fiber sheet Ifayibha ekhethekileyo edityaniswe nekhabhoni. Ineempawu zokumelana nobushushu obuphezulu, ukuchasana nobushushu, ukuhanjiswa kombane, ukuhambisa ubushushu kunye nokumelana nokudumba. I-fibrous, ithambile kwaye ingaqulunqwa ngeendlela...
Ingcaciso yeMveliso Isisindo sokuKhanyisa iKhabhbhari Fibeta Ishiti yeDrones Ifayibha ekhethekileyo edityaniswe nekhabhoni. Ineempawu zokumelana nobushushu obuphezulu, ukuchasana nobushushu, ukuhanjiswa kombane, ukuhambisa ubushushu kunye nokumelana nokudumba. I-fibrous, ithambile kwaye ingaqulunqwa ngeendlela...